अब यसरी सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने, यस्तो छ सरकारकाे सहमति! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अब यसरी सबै तहका परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने, यस्तो छ सरकारकाे सहमति!
काठमाडौ । कोरोनाका कारण रोकिएका सबै तहका परिक्षा संचालन गर्न अब विद्यालय र क्याम्पस र सबै निकायहरुलाई बाटो खुलेको छ । कोरोनाको महामारीका रोकिएका विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएसंगै बाटो खुलेको हो ।
कोरोनाको जोखिम भएका कारण अत्याधिक भिडभाड हुने क्षेत्र संचालनका लागि सरकारले अनुमति दिएको छैन । विद्यालय र क्याम्पस पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले अध्ययन र परिक्षा समेत रोकिएका छन् । विद्यार्थीहरु ६ महिना देखि विद्यालय र कलेज जान पाएका छैनन् ।
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर अब सबै तहका परिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति सरकारले दिएको हो । बुधबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि सहमति दिएको बताए